Nyora Dissertation Yangu mu Zimbabwe
Unoda rubatsiro rwehunyanzvi kunyora? Tora bepa remhando yepamusoro kubva pane rakanakisa Nyora Kurambwa Kwangu mu Zimbabwe yakanyorerwa kumatanho ese edzidzo.
Maitiro Ekunyora Kwangu Kuramba - 3 Matanho Ekubatsira Iwe Kudzidza Kunyorera Kwangu Kuramba
Semudzidzi, unofanirwa kudzidza kunyora chinyorwa changu, sezvo izvi zviri izvo zvinoita kuti yako PhD ive degree rako rezvechiremba. Saka zvinhu zvakawanda zvichauya munzira yekupedzisa yako thesis. Iwe unogara uchifunga mazano matsva kwauri dissertation theme, uye zvakare ibasa rako kutsvagisa musoro wenyaya wako kuti uve nechokwadi chekuti urikuita basa rakanakisa raunogona.
Kuti ugone kunyora chinyorwa chako, unofanira kutanga waita shuwa kuti une thesis mupfungwa. Izvi zvakakosha kuti uzive kana iwe uchida kugadzira rakabudirira dissertion. Zvinokurudzirwa kuti iwe ugadzire thesis usati watanga kushanda pane yako dissertation. Idanho rakakosha kutora kana iwe uchida kuve nekunzwisisa kuri nani pane zvauri kuita.
Mukutsvagisa kwako dissertion yako, unofanirwa kutanga watanga kunyora zvinyorwa zvako. Iyi ingori pfungwa yakajairika yekuti dissertation yako ichaenda sei. Unofanirwa kucherechedza chero mapoinzi aunoona achifadza kana kucherechedzwa aungade kuisa mune yako dissertis. Paunenge uine rondedzero yedhipatimendi rako, unenge uine nzwisiso iri nani yenyaya yako, unova musoro wenyaya yako.
Mushure mekugadzira rondedzero yenyorwa yako, unofanira kubva watanga kunyora chinyorwa chako. Iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti chinyorwa chako hachina mhosva. Kana paine chimwe chinhu chausingade nezve dissertion, unofanirwa kuve nemumwe munhu anozviverenga usati wawana yako Ph.D. Iye purofesa haagamuchire dissertation ine chero zvikanganiso kana kusiiwa.
Chinyorwa chako ndiwo magumo ebasa rako rakaoma uye kudzidza. Uri kutora mhiko yekupedzisa yako Ph.D. munguva shoma sezvinobvira. Kuti uwane iro degree, zvinogona kutora iwe makore akati wandei, asi zvichave zviripo. Uye kana wapedza nedhigirii rako, unogona kutsvaga basa rakanaka, kudzokera kuchikoro kuti utore rimwe, uye pakupedzisira uwane doctorate.
Kunyora dissertation kwakanyanya kupfuura kungoisa pamwe chete chokwadi nekunyora rondedzero. Chinyorwa chako ndiko kupera kwebasa rako rakaoma nekutsvagisa, uye kana ukasangwarira, dissertation yako inogona kupedzisira yaita kunge bhuku rekuverenga pane dissertation. Kana iwe usiri kuda kuve neisina kunyorwa dissertion, saka unofanirwa kuona kuti une chinyorwa chako chakanyorwa nemunyori munyori.
Kunyora dissertation yakanaka kunotora nguva nesimba, asi zvinogona kuitwa nemidziyo chaiyo. Iwe unogona kuhaya nyanzvi nyanzvi, senge muperekedzi, asi iwe unogona zvakare kuwana zviwanikwa zvakawanda pamhepo kuti zvikubatsire neako dissertation kunyora zvakare.
Kana iwe ukatevera nhanho dziri pamusoro, saka iwe unofanirwa kukwanisa kunyora chinyorwa chako zvinobudirira uye kuchipedzisa munguva yeF.D. yako. Paunenge iwe wapedza neyako dissertation, unogona kutsvaga basa rakanaka uye kutanga hupenyu hutsva mushure mekupedza chikoro.
Asi, zvakakosha kuti iwe wakazvipira kunyora chinyorwa chako uye kuti uteedzere nhungamiro iri pamusoro usati watombotanga kunyora dissertation yako. Izvi zvinokuseredza kusagadzikana kuzhinji munzira. Iwe haufanire kunetseka nezve kunonoka pane zvaunogoverwa kana kunamirwa nedissert isina kunyorwa zvakanaka sezvawaida kuti ive.
Nzira yakanaka yekudzidza kunyora dissertion yako kutaura nemudzidzisi. Ivo vachakwanisa kukupa hwaro hwakasimba pamaitiro ekuzviita, uye vachakwanisa kukuratidza kuti purofesa achaongorora sei chinyorwa chako. mune ramangwana kuona kuti urikushandisa fomati chaiyo yepepa rako.
Imwe nzira huru yekudzidza kunyora dissertation yako kutsvaga painternet kuti uwane ruzivo nezvekuti unganyora sei dissertation yako. Kune akawanda mawebhusaiti anopa tutorials uye matipi ayo anogona kukubatsira iwe kutanga munzira yako yekuve unobudirira kudzidza nyanzvi. Ivo zvakare vane ruzivo rwekuti ungahaya sei yakanaka dissertation yekunyora sevhisi kuti ikubatsire iwe neako dissertation.
Kune zvakawanda zvimwe zviwanikwa zvihombe zviripo zvekukubatsira nerunyorwa rwako rwekunyora, uye iwe unofanirwa kugara uchifunga kuti chinyorwa chakanyorwa zvakanaka chinoratidza kuita kwako kwedzidzo uye chakakosha kuverenga zvakadzama. Iyo dissertation chiratidzo cheako kugona kudzidza uye chinofanirwa kuve nacho mune yega purogiramu yechikoro.